Kooxaha Atletico Madrid, Chelsea, AC Milan, Arsenal iyo Paris Saint-Germain oo isha ku haya Belotti oo qiime jaban jooga. – Gool FM
Kooxaha Atletico Madrid, Chelsea, AC Milan, Arsenal iyo Paris Saint-Germain oo isha ku haya Belotti oo qiime jaban jooga.
(Torino) 24 Maarso 2018 – Kooxda Torino ayaa la sheegayaa inay diyaar u tahay inay qiime ka jaban midkii hore ku fasaxayso qannaaska Andrea Belotti kaasoo hoos ugu soo dhacay €50m oo euro, jeer uu 24-jirkani 2016 saxeexay qandaraas lagu fasiqi karo €100m, kaasoo weliba ka ansaxaya kaliya kooxaha dibedda.
Taasi waxay ka dhalatay fasal-ciyaareedkii cajiibka ahaa ee uu ka dhaliyay 26 gool horyaalka Talyaaniga 35 kulan oo uu saftay, balse sanadkan dhaawacyo ayaa la degey isagoo 9 gool uun dhaliyay 25 kulan oo tartamada oo idil ah.
Sida ku dhigan Corriere dello Sport, madaxwaynaha Torino ee Urbano Cairo ayaa u diyaar ah inuu fasoxo Il Gallo oo uu ku fasixi karo ilaa €50m.
Tani waxay soo jeedinaysaa kooxda Milan – oo ah kooxda qura ee uu Belotti taageero – sidoo kale Atletico Madrid, Chelsea, Arsenal iyo Paris Saint-Germain.